Ajụjụ 118 Critical Channel Istanbul si na CHPli Tanrıkulu | RayHaber | raillynews
[08 / 02 / 2020] Ego ruru Nde Euro 50 maka Fahrettin Altay Narlidere Metro	35 Izmir
[08 / 02 / 2020] Hiamo kọwara na Imamoglu	34 Istanbul
[08 / 02 / 2020] Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya Eastern Express na-anabata ndị nnọchi anya EU	06 Ankara
[08 / 02 / 2020] Ministry of Transport: '2002 Ndị mmadụ nwụrụ n'ihe ọghọm ụgbọ okporo ígwè na 2019-1678'	06 Ankara
[08 / 02 / 2020] Nnukwu Busgbọ Okporo Istanbulgbọ Anyịnya Istanbul nwetara Mmasị nke Ndị Azụmaahịa na Citizensmụ Amaala	34 Istanbul
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulAjụjụ 118 Critical Channel Istanbul si na CHPli Tanrıkulu
24 / 01 / 2020 34 Istanbul, General, Channel Istanbul, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Ndị otu Republican ndị Istanbul Istanbul osote Atty. Sezgin Tanrikulu, Channel Istanbul ọkọnọ amaghị esịnede 118 Pojesi oké egwu ajụjụ banyere Grand National Assembly nke Turkey.
Ọtụtụ puku ụmụ amaala nke oru Kanal Istanbul emeela mkpesa ha n'ime usoro iwu na ha ga-emebi mbibi a na-agaghị agbanwe agbanwe na okike.
Usoro mkpesa maka mkpesa EIA na Kanal Istanbul, nke malitere na Disemba 25, agwụla, na agbanyeghị oge ihu igwe oyi, ndị bi na Istanbul efegharị na vinlọ Ọrụ oflọ Ọrụ Ihe Gburugburu nke Istanbul na Balmumcu ruo ụbọchị iri ma nyefee 10 puku arịrịọ n'aka ụlọ ọrụ ahụ.
Sezgin Tanrıkulu nke CHP kwuputakwara na nkwenye ya na mmefu ego aego ruru $ 12 ijeri 626 nde mgbe agbakọ ọnụego mgbanwe taa. Na ngosipụta gọọmentị nke ofgbọ njem na akụrụngwa kwadebere na 2018, ekwuputara na ngụkọta ọnụ ahịa nke Kanal Istanbul ga-efu ijeri dollar 20. Na peeji nke 40 nke ngosi 37 dị, “mkpokọta ngụgụ, ụgbọ njem na nchekwa nchekwa: ijeri dollar 10, mkpuchi, ịka akara, ala. Agụnyere na atụmatụ a bụ data maka ndozigharị, mmiri ezumike, ụsọ ihe mberede, akụrụngwa arụmọrụ wdg: $ 5 ijeri, ụgwọ ọnụ ụzọ ụgbọ elu: ijeri $ 15, mpụga akụrụngwa na sistemụ njem: $ 5 ijeri.
Ajuju nke CHP Istanbul Vice Sezgin Tanrıkulu bụ ndị a:
1. Ole n’ime ụmụ amaala anyị ga-ebi na ọnụ ahịa itinye ego maka ọrụ ngo Kanal Istanbul?
2. Oru KOSGEB ole ka enwere ike kwado ya?
3. Ole umu akwukwo ole nwere ike nweta nkwuputa ego mmuta ha site na onu ahia ego nke Kanal Istanbul Project?
4. Onu umu akwukwo ole ka aga enweta akwukwo ego site na onu ogugu ego nke Kanal Istanbul Project?
5. Mgbe anyị tụlere na ọnụ ọgụgụ enweghị ọrụ na-eto eto bụ 4,5 pasent na mmụba nke isi 26,1, na afọ 15-64, ọnụego a bụ 2,4 pasent na mmụba nke isi 14,1, oleekwa ụmụ amaala nwere ike itinye ego ha nwere ike iwepụ nsogbu enweghị ọrụ?
6. Obodo ole ka enwere ike wuru ebe eji mmiri ọ drinkingụ drinkingụ arụ ọrụ site na ego itinye ego na Kanal Istanbul Project?
7. Olee obodo ole ga-erute site n’okporo ụzọ unyi site na ọnụ ahịa itinye ego nke Kanal Istanbul Project nwere ike ịbụ ụzọ okporo ụzọ?
8. Ole ka enwere ike ịzụta udu mmiri snow na ụzọ nke okporo ụzọ maka ogige anyị, obodo, distrikti na ógbè ndị emechiri ụzọ ya n'ihi ụgwọ ego nke Kanal Istanbul Project na nnukwu snow?
9. ole pallet amallances 4 × 4 ka a ga-ebugharị maka ndị ọrịa ahụike mberede ka ndị ọrịa nọ n'okporo ụzọ kpuchie snow site na ọnụ ahịa itinye ego nke Kanal Istanbul Project?
10. Ole ulo akwukwo ole ka apuru iji wuo ulo oru Kanal Istanbul?
11. Ole ndi nkuzi a na-eche ka edoro ya na mmezi onu ego nke Kanal Istanbul Project ka ebido ịmalite oru?
12. Ole ndi nkuzi nwere nkwarụ nke na-eche ka edobe ya na ego itinye ego na Kanal Istanbul Project ga-amalite ọrụ?
13. Ole mmadu ndi n’acho ịlụ di na nwunye na ntinye aka nke Kanal Istanbul Project nwere ike inweta enyemaka di na nwunye?
14. Gita ole n’ime GSS ụmụ amaala anyị ka enwere ike ịkwụ ụgwọ ọnụahịa ego usoro nyocha Kanal Istanbul?
15. Kedu ka ụmụ amaala nwere ike isi nweta SMA n'efu na ọnụahịa itinye ego nke Kanal Istanbul Project?
16. Ozo o gha jupuru ulo oru ego oru ngo nke Kanal Istanbul Project?
17. Ole ka enwere ike iwulite ụlọ ọgwụ ọha na eze, gụnyere ọnụahịa ego nke Kanal Istanbul Project na akụrụngwa ime ụlọ?
18. Ole ụmụ amaala ole, ndị na-eche oge atọrọ na ahụike, yana uru itinye ego na oru ngo Canal Istanbul Project ga - enyere aka ịmalite?
19. Ole ndi oru ugbo ka enyere ike inye traktọ jiri 50% nyere aka na ntinye aka oru ngo Kanal Istanbul?
20. Ole ndi oru ugbo (iri n’otu n’otu) ka a ga-enye ndi ara ehi raara nye onu ogugu nke Kanal Istanbul Project?
21. Site na ntinye ego nke Kanal Istanbul Project, ole ndi oru ugbo (10 onye obula) ka aga enye gi ihe mkpuchi?
22. Ole ka ndi na - eto eto nwere ike inwe asusu isii nke asusu ala ozo maka mmuta asusu ala ozo site na ntinye aka nke Kanal Istanbul
23. Gini ole R&D na teknụzụ mmepe teknụzụ nwere ike iguzobe ya na ọnụego itinye ego na Kanal Istanbul Project?
24. Ole ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri ole ka a ga-eji wuo ụlọ ọrụ Kanal Istanbul?
25. Ole ka umunwanyi ndi nwere ike isi gota ego oru ngo nke oru Kanal Istanbul?
26. Ozo ndi n’eme oku n’enwe ego ka eji zụta nke Kanal Istanbul Project?
27. Ole ka enwere ike ịhọpụta ụmụ amaala nwere nkwarụ n'ihu ọha site na ọnụego itinye ego maka arụmọrụ Kanal Istanbul?
28. Ulo akwukwo ole nwere ike irite uru na ulo akwukwo mahadum n’enweghi ego site na iji ego ulo oru aka nke Kanal Istanbul Project?
29. Site na ego itinye ego na Kanal Istanbul Project, ole ụmụ akwụkwọ mahadum ka enwere ike kesaa kaadị nwere nguzozi 1000 TL kwa afọ ga-eji mee ihe omume na nka?
30. Ole kedu ike igwe nwere ike wuru ya na ulo oru ubochi Kanal Istanbul?
31. Ole ụgbọ-ikuku ole ka etinyere na ntinye aka nke Kanal Istanbul Project?
32. Ole ka ndi mmadu gha erite uru site na nhazi onyinye ato nke 3600 site na onu ogugu ego nke Kanal Istanbul Project?
33. Okwa ugbo ole ka enwere ike ime na onu ogugu nke Canal Istanbul Project?
34. Ulo ụgbọ elu ole ka enwere ike ime na ọnụ ahịa itinye ego maka Mmemme Canal Istanbul?
35. Site na ego itinye ego na Kanal Istanbul Project, ole ụmụ akwụkwọ mahadum ka a ga-enye ha ego ha ga-eji sonye na njem ụlọ (otu ugboro n'afọ) ka ha wee nwee ike imeziwanye onwe ha n'etiti ndị mmadụ na ọdịbendị ha?
36. Site na ego itinye ego na Kanal Istanbul Project, ole ụmụ akwụkwọ mahadum ka a ga-enye ha ego ha ga-eji tinye aka na njem ndị ọzọ (otu ugboro n'afọ) ka ha wee nwee ike imeziwanye mmekọrịta ha na ọdịbendị ha?
37. ọkara nke mgbazinye, ụlọ, ụlọ obibi na iche ụmụ akwụkwọ mahadum maka ọnụahịa ego nke Kanal Istanbul Project, enwere ike kpuchie steeti ahụ?
38. Site na ego itinye ego na Kanal Istanbul Project na ole umu akwukwo mahadum ji ọkara nke ụgwọ ọkụ eletrik nwere ike kpuchie site na steeti?
39. Ole ndị nne na-arụ ọrụ nwere ike ịnata enyemaka ụmụaka site na ọnụego itinye aka na Kanal Istanbul Project
40. Ole ka mmadụ nwere ike isi were ya n'ọrụ site na inye steeti ego itinye ego na ego afọ ise nke Kanal Istanbul Project site n'aka steeti?
41. Ole ndị nne na-arụ ọrụ nwere ike ịnata enyemaka ụmụaka site na ọnụego itinye aka na Kanal Istanbul Project
42. Ole ebe enwere ike iguzobe ulo akwukwo puru iche na ego mkpuchi uchu Kanal Istanbul Project?
43. Ole ka enwere ike imepe ulo akwukwo ihe omumu nke onu ogugu Kanal Istanbul?
44. Ole kedu mmiri ịgwọ unyi nke mmiri ga-eji guzobego na ntinye aka nke Kanal Istanbul Project?
45. Kedụ ebe nchekwa ụmụ anụmanụ nwere ike iji wuo ọnụ ahịa ntinye ego nke Kanal Istanbul Project?
46. ​​Kedụ ebe nchekwa ụmụ anụmanụ ga-esi wuo ụlọ nyocha Kanal Istanbul?
Ugbo ole ka enwere ike iji ulo oru ego nke ulo oru anakpo Istanbul nke 47 na aru oru 200 mmadu?
48. Ole n'ime ihe nlere anya ka ejiri wuo Kanal Istanbul Project?
49. Ole ogbunigwe ole ka a ga-esi wuo ụlọ ọrụ nyocha nke Kanal Istanbul?
Kedu kedu kilomita enwere ike iji ọnụ ahịa ego 50. Kanal Istanbul Project?
51. Ulo ole ka enwere uzo uzo abuo ka aga egbo ma megharia ya na onu ahia Kanal Istanbul Project ka enwere ike idozi ma dozie ya?
52. Ole ebe enwere kwụrụ ụgwọ enwere ike iji ọnụ ahịa ego nke Kanal Istanbul Project wuo?
53. Ulo oru kemịkal ole ka enwere ike ịkwado ya na ntinye aka nke Kanal Istanbul Project, na mba na mba nke ọgwụ pesticides ga-enweta?
54. Kedụ ọrụ TUBITAK ole ka a ga-esi nye ọnụahịa ọnụahịa nke Kanal Istanbul Project?
55. Ole ebe ulo oru ahu ike meghere iji mepe emepe nke Kanal Istanbul Project?
56. N'ime obodo ole ka a ga-enye ọzụzụ ọzụzụ maka ọrụ nyocha Kanal Istanbul?
57. Ole ka enwere ike imeghari ulo akwukwo ulo akwukwo di elu dika ihe ochoro nke afọ si di na ntinye aka nke Kanal Istanbul?
58. Ole akwukwo ole ka inyocha akwukwo na akuko a gha akwadoro site n’enye ha ulo oru ndi ozo dika ulo oru Turkish asusu na ndi Turkish Historical Society na ego ugwo nke Kanal Istanbul Project?
59. Ọnụ ego ntinye ego nke Kanal Istanbul Project na sinima, ihe nkiri wdg. Enwere ike ịkwalite ya site na enyemaka nke ihe mgbasa ozi dịka?
Site na ego itinye ego maka oru ngo 60th Canal Istanbul, ole ụmụ amaala nwere nkwarụ ka a ga-enye ụgbọ ala batrị na awara awara n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ?
61. Ole ka ụmụ amaala nwere nkwarụ ka a ga-esi nweta enyemaka ịnụ ihe na ọnụahịa ego aka nke Kanal Istanbul Project?
62. Enwere ike iji ọnụ ahịa ego nke Kanal Istanbul Project rụọ ogige na-enweghị mgbochi, nwere ọtụtụ ụmụaka agụmakwụkwọ pụrụ iche nwere ike ịzụlite mmụta ha, ahụmịhe ha na nka ha.
63. Ego ulo oru ngo nke Canal Istanbul Project na mmeghari ohuru, ihe ndi ahu ike na aru ike ndi ozo. enwere ike kpuchie steeti ahụ?
64. Ole ka usoro ọgwụgwọ anụ ahụ na igbazigharị ụlọ ka enwere ike imepe site na ọnụahịa itinye ego nke Kanal Istanbul Project?
65. Ole ka enwere ike imepe Centres Health Mental Community Community site na ọnụego itinye aka na Kanal Istanbul Project?
66. Ole mmadụ ole na-arụ ọrụ n'ime ọhaneze ka a ga-enye ọzụzụ asụsụ ogbi na ọnụego itinye aka na Nlekọta Kanal Istanbul?
67. Ole n'ime ndị ọrịa, ndị dị oke mkpa na ọnụ ahịa ọgwụ, ịwa ahụ, ọgwụgwọ nwere ike kpuchie ọnụ ahịa itinye ego maka ọrụ ngo Kanal Istanbul?
68. Ole ụmụ ole ga-arụ ọrụ n'agbanyeghị na ha erubeghị afọ 18 na ego ha ga-eji rụọ ọrụ Kanal Istanbul nwere ike ịga n'ihu na ndụ agụmakwụkwọ ha site na ịkwado ego?
69. Site na ego itinye ego na oru ngo Kanal Istanbul, ezinụlọ ole (mmadụ 2500 na-enweta ego kwa ọnwa n'okpuru 4 lira) nwere ike ịgbazite, gas eke, ọkụ eletrik na mmiri?
70. Ole ka ụmụ nwanyị ga-esi nọrọ na ebe ụmụ nwanyị nọ maka ego nke itinye ego na ihe oru ngo Kanal Istanbul?
71. Ole ka enwere ike guzobe usoro nchịkwa gburugburu ebe obibi iji gbochie nsogbu gburugburu ebe obibi na ọnụego itinye ego nke Kanal Istanbul Project?
72. N’ime obodo ole ka a ga - esi hụ na arụmọrụ “Nkewa dị iche iche na isi mmalite” na ntinye ego nke Kanal Istanbul Project?
73. Kedụ ego ole ka enwere ike ịkwado gburugburu ebe obibi ka ọ nwee ike itinye ego n'ọrụ nyocha Kanal Istanbul?
74. Ole ka oru ugbo kwesiri iputa na ntinye aka nke Kanal Istanbul Project?
75. Ọnọdụ ole ụlọ akwụkwọ maka iji teknụzụ nwere ike kwalite maka ọnụahịa ego nke Kanal Istanbul Project yana itinye n'ọrụ nke ụkpụrụ nke ohere nha na agụmakwụkwọ (ọkachasị n'obodo nta na n'ime ime obodo)?
76. Site na ntinye ego nke Kanal Istanbul Project, ole ụmụ amaala na-enweghị ebe obibi ka enwere ike ịnabata oge niile?
77. Ole otu na-abụghị ndị gọọmentị na-arụ ọrụ maka ndị na-enweghị ebe obibi ka enwere ike ịkwado ya na ntinye ego nke Kanal Istanbul Project?
78. Ulo akwukwo ole ka ekwesiri kwado maka iweghachi nke ndi obodo anyi n’enweghi ulo na nke onu ogugu nke Kanal Istanbul Project?
79. Ole ụlọ ihe akụkọ ihe mere eme ka enwere ike ibugharị ya site na ọnụ ahịa itinye ego nke Kanal Istanbul Project?
80. Ole ụlọ ala ọma jijiji ole ka enwere ike ịmalitegharị site na ọnụahịa itinye ego nke Kanal Istanbul Project?
81. Kedụ ọrụ AFAD ole ka enwere ike iji kwụọ ụgwọ maka itinye ego nke Kanal Istanbul Project
82. Enwere ike ịnye ọrụ nlekọta anụ ahụ n'efu maka ọnụahịa udu nke Kanal Istanbul Project maka anụmanụ ole kpafuru akpafu?
83. Ole ka umu akwukwo ndi choro enyemaka nke ndi obodo (nke ÖSYM) na ego ule ule nke Kanal Istanbul Project ka ndi gọọmenti ga-esi kwụọ ụgwọ?
84. Kedụ ụlọ obibi ọha mmadụ ka enwere ike wuru ọnụ ego ya ga-eji Kanal Istanbul Project (puku narị TL ọ bụla)?
85. Ole ka Satellites ole nwere ike izipu gaa na mbara igwe site na ọnụego itinye aka na Kanal Istanbul Project?
86. Ole ka ndi oru itumgbere ahia nke choro ibido ahia nke aka ha site na onu ogugu ego nke Kanal Istanbul Project nwere ike inweta 50 TL na nkwado?
87. Ole ụlọ alakụba, ụlọ nche, ụlọ nzukọ na ụgwọ ọkụ elektrik ka enwere ike kpuchie ọnụ ahịa itinye ego na oru ngo Canal Istanbul?
88. Ego ole ka ụlọ alakụba, cemevi, ụlọ nzukọ na ụlọ ọkụ ọkụ ụlọ ụka ga-ekpuchi site na itinye ego maka atụmatụ oru ngo Canal Istanbul?
89. Kedụ ụzọ ụgbọ oloko ọgbara ọhụrụ ga-eji akwụ ụgwọ ọnụahịa Kanal Istanbul Project ga-ewu?
90. Ole ebe nrụrụ ekpo dị siri ike ka a ga-enwe ike guzobe ya na ọnụahịa ego nke Kanal Istanbul Project?
91. Kedụ ụlọ ndị nọọsụ nwere ikike nke otu narị ka enwe ike ike iji ọnụ ahịa itinye ego nke Kanal Istanbul Project?
92. Ogwu ole ma nyocha a ka enwere ike ịba ụba site na ịba ụba ọnụahịa ego nke Kanal Istanbul Project na mmefu ego nke ekenyela maka olulu mmiri mgbe ochie?
93. Ugbo ole ngosi nka ka enwere ike idobe ya na ntinye aka nke Kanal Istanbul Project?
94. Ole n’ime ụlọ ihe nkiri ụlọ steeti ka aga-eji ehiwe ego ole ejiri Kanal Istanbul nweta?
95. Ole ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ ka enwere ike kenye ya na ọnụ ahịa itinye ego nke Kanal Istanbul Project?
96. Oru ole ka enwere ike kwado ya na ntinye aka nke Kanal Istanbul Project yana nchebe nke umunwanyi site na ime ihe ike, dozie nsogbu nke ndi nwanyi na ndi umu nwanyi na ndi oru ha?
97. Ulo abuo (ya na onodu igha ala n’onwe ya) ka apuru itinye n’otu acre acho achoro ya na ulo oru mbo nke Kanal Istanbul?
98. Kedụ ụlọ akwụkwọ ọta akara ka enwere ike imepe ya na ọnụahịa ego nyocha Kanal Istanbul Project?
99. Kedụ ngalaba agụmakwụkwọ ga-akwado atụmatụ itinye ego na ntinye aka nke Kanal Istanbul Project?
100. Ole ụlọ R&D ole ka enwere ike ịmalite na ọnụego itinye ego nke Kanal Istanbul Project?
101. Ole oru ole ka enwere ike itinye ego site na iwelie ego ulo oru nleba anya Kanal Istanbul na R&D na Nkwado Center?
102. Ole ebe enwere ike imeghari ume ike ọruma nke Kanal Istanbul Project?
103. Ole oru ole ka apuru iru site na ịbawanye ihe nkwalite sitere na ngalaba IT site na uru itinye ego nke Kanal Istanbul Project?
104. Kedụ klas ole nwere ụmụ akwụkwọ iri abụọ ka enwere ike imeghe iji nye ọnụ ahịa ego ọnụahịa nke Kanal Istanbul Project ka ọ bụrụ ụlọ akwụkwọ praịmarị?
105. Ole oru ole ka apuru inye aka inye aka na mmepe nke otutu ihe nlele nke Kanal Istanbul?
106. Gini ka eji ego ndi eji ego ahia ngwa ahia Kanal Istanbul ga-enyere gi aka?
107. Ole oru ngo uko erimeri ka a ga-eji kwado ego a kapaliri Kanal Istanbul?
108. Kedụ ego ka aga-enye maka itinye ego na Kanal Istanbul Project yana ole redio, telivishọn, akụrụngwa nkwukọrịta na akụrụngwa na-arụ?
109. Enwere ike nweta isi mmalite nke ọnụahịa ego maka oru ngo Kanal Istanbul na mmepụta nke ikuku na mbara igwe?
110. Ole oru ngo ulo oru ahihia a ka apuru iji ego ya nye onyinye nke Kanal Istanbul?
111. Enwere ike isi nweta isi iyi maka oru ngo nke ulo oru Istanbul Canal na imeputa akụrụngwa na oru ngo a?
112. Ole ahia ihe omuma ahia nke mpempe akwukwo nke Kanal Istanbul?
113. Site na ntinye ego nke Kanal Istanbul Project, enwere ike inye ego maka oru ngo ụgbọ elu?
114. Ulo oru ole ka ha nwere ike inweta nkwado ego opekata mpe otu afọ jiri ego ulo oru mbo nke Kanal Istanbul Project?
115. Enwere ike inye onyinye iji kwado itinye aka na anụ ụlọ nke ọtụtụ ndị bi na ngalaba dị n'okpuru Ọrụ Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Anatolia site na ọnụego itinye ego na Mmemme Canal Istanbul?
116. Mmadu ole n’ogbe ohia jiri kpuchitere Oke Oke Osimiri Ojii kpuchie onu ahia ulo oru Canal Istanbul Project nwere ike inye onyinye iji kwado itinye ego ha n’anumanu?
117. Ole mmadu ole n’etiti ogbe ndi oru ihe oru a na akporo Konya Plain ka enyere ha onyinye inye aka n’atinye aka na anumanu ha?
118. Ole otutu ndi mmadu no n'ime ogbe Eastern Anatolia Project na ego ha ga enweta Kanal Istanbul Project ka enyere ha ego ha iji kwado ulo oru anumanu ha?
Tanrikulu jụrụ Prime Minista banyere ihe merenụ na Istanbul Metro
Ahmet Kenan Tanrikulu nke MHP: Ịmara ụgbọ okporo ígwè ndị ọzọ
CHP Tanrikulu, Damage okporo ụzọ na nzuko omeiwu
Tanrıkulu jụrụ TCDD maka mmegide ọnụ na nke anụ ahụ
Tanrikulu, 3 Site na Ụbọchị Ọ Bụrụ. Ejiri Ajuju maka Ọnụego Ojiji
CHP Mgbasaozi na-eme ka ndị Metro na-aga n'ihu na nzuko omeiwu
CHP Tanrikulu Ọ jụrụ Prime Minister na-ekwu
Ajụjụ nke CHPli Akkiraydan Metro
Nnyocha nke Ịzmir Tram Acquisition na Tanrikulu na MHP
Nkwupụta okike na ntanetị: Basmane - Afyon Line Km: Reinforced Ihe n'etiti 118 + 600 - 119 + 120…
Ajụjụ a na-edozi ihe kpatara ya: Gịnị mere a na-enyeghị nnabata ịkwụ ụgwọ?
Na-ekiri ebe ọwụwa anyanwụ n'elu ugwu Chineke
Osimiri na ugwu nke chi
Osimiri Oké Osimiri Osimiri Ọwụwa Anyanwụ
Channel Istanbul ụgwọ
Ihe oru ngo Kanal Istanbul
Ulo oru nyocha nke Kanal Istanbul Project
Kanal İstanbul ajụjụ chọrọ
More ọkachamara aha ya bụ sezgin tanrıkulu
Nkwupụta maka ọmịiko: Adapazarı-Mithatpa Stationa Station Regeneration na Scissor Post Work
Nkwupụta Okike Onye Mgbapụta: A ga-azụta mgbatị ahụ
Denizli USB Car Wind mgbochi
Turkey Rally Championship si Title nkwado Shell Helix
2020 National Caromobile Sports Kawapụtara ọkwa
Mkpebi nke Hike maka Publicgbọ njem ọha nke Istanbul
25 Ndi otu ulo oru ndi n’eme ka ulo ha
BMW 4 Series Leaks Foto